Wararkii ugu dambeeyey wada-hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee Jabuuti - Caasimada Online
Home Somaliland Wararkii ugu dambeeyey wada-hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee Jabuuti
Wararkii ugu dambeeyey wada-hadallada Soomaaliya iyo Somaliland ee Jabuuti
Jabuuti (Caasimada Online) – Waxaa lagu wadaa in todobaadkan gudihiisa ay dib u bilowdaan wada-hadalladii u dhexeeyey madaxda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Somaliland, kuwaas oo hakad ku jiray afartii sano ee u dambeysay.
Wada-hadallada ayaa ka dhacaya dalka Jamhuuriyadda Jabuuti, halkaas oo ay isugu tagayaan wafuud ka kala socoto labada dhinac ee Soomaaliya iyo Somaliland.
Sida ay horey u baahisay Caasimada Online madaxweynaha Soomaaliya iyo wafdi ka tirsan dowladda federaalka ayaa saacadaha soo socda ku wajahan dalka Jabuuti, waxaana socdaalkaasi Madaxweyne Farmaajo ku wehlinaya, Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya, Mudane Xasan Cali Khayre, guddoomiyaha golaha shacabka ee BF Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan, sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay.
Sidoo kale waxaa Somaliland shirkaasi uga qeyb-gali doono wafdi culus oo uu hoggaaminayo madaxweynaha maamulkaasi, Mudane Muuse Biixi Cabdi.
Haddaba yaa garwadeen ka ah isu-keenida iyo wada-hadallada labadada dhinac?
Inkastoo ay Jabuuti isugu tegayaan, islamarkaana ay marti-qaatay madaxda Muqdisho iyo Hargeysa ayaa hadane waxaa jira gacma kale oo door weyn ku leh wada-hadallada labada dhinac oo muddo fog laga soo dhaqeynayey.
Sida ay wararku sheegayaan waxaa wada-hadalladaasi dib loo bilaabayo markale gadaal ka riixaya Mareykanka, Midowga Yurub iyo dowladaha deriska sida Itoobiya iyo Jabuuti.
Haddii uu qabsoomo kulankan ayaa wuxuu noqonayaa is-aragii labaad ee Farmaajo iyo Muuuse Biixi, kuwaas oo horey ugu kulmay magaalada Addis Ababa.
Arrimahaan oo idil ayaa ku soo beegmaya, xilli madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo furitaankii kalfadhiga 7-aad ee labada Aqal uu ka sheegay inuu soo dhaweynayo in din loo bilaabo wada-hadallada u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland.